Daa'uud Cabdulle Xirsi - Wikipedia
Maajo 1924 ( 93–94Jir)
Diseembar 16, 1969(1969-12-16) (45 Jir)
Taliyihii ugu horeeye[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
1954kii ayuu ku soo laabtay Soomaaliya, wuxuuna ku shaqeynayay sarkaalnimo dhinaca booliiska kadibna wuxuu ka qeyb galay diyaarintii ciidammadii Xooga Dalka Soomaaliyeed oo ay markaas abaabulaysey dowladii ee uu horkacaaye Cabdullaahi Ciise. Xeerkii lagu dhisay Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ayaa darajadda Janaraalka ah u dalacsiiyay Daauud Cabdulle Xirsi oo noqday taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ee ugu horeeyey. waxa uu noqday janaraaldaauud taliyihii ugu da,da yaraa taariikhda soomara ee maamula ciidanka qaranka .sidoo kale waxaa lagu xasuustaa janaraal daa,uud cabdulle xersi in uu soo saaray dadka ugu magaca dheer xaga ciidanka sida (( j maxamed nuur gallaal ,j macamed faarax caaydiid , col c/laahi yuusuf axmed ,j c/raxmaan mujrim /j c/raxmaan siigeeyste , j maxamed liiqliiqato )) iyo in kale oo badan . sidoo kale waxa uu taliye u ahaa kana soo hoos shaqeeyay ee ugu horeeyay ((j maxamed abshir muushe ))iyo ((j maxamed cali samatar , jsalaad gabeyre , j gorgor ))iyo ((j maxamed siyad barre )) oo mar aha madaxweynihii dalka soomaaliya. oo in toodaba sheegeen in eey ka istafiidiin aqaan dheeraad ah ,
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Daa%27uud_Cabdulle_Xirsi&oldid=151054"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 06:37, 20 Diseembar 2015.